Jizọs na Nna Ya Dị ná Mma, ma Ọ Bụghị Chineke | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
“MỤ NA NNA M BỤ OTU”
JIZỌS AGBAGHAA EBUBO E BORO YA NA Ọ BỤ CHINEKE
Jizọs abịala na Jeruselem maka Ememme Nraranye (nke a na-akpọkwa Hanuka). A na-eji ya echeta nke ugboro abụọ a raara ụlọ nsọ dị na Jeruselem nye Jehova. Ihe karịrị otu narị afọ tupu mgbe ahụ, Eze Siria a na-akpọ Antiokọs nke Anọ Epifini bibiri nnukwu ebe ịchụàjà a rụrụ n’ụlọ nsọ Chineke ma rụọ nke ya. Ka oge na-aga, ụmụ onye nchụàjà, bụ́ onye Juu, napụtara Jeruselem n’aka Eze ahụ ma rara ụlọ nsọ ahụ nyeghachi Jehova. Kemgbe ahụ, ọ na-abụ n’afọ ọ bụla, n’abalị iri abụọ na ise n’ọnwa Kislev, ndị Juu na-eme ememme iji cheta mgbe a raara ụlọ nsọ ahụ nyeghachi Jehova. Ọnwa Kislev bụ ngwụcha ọnwa Nọvemba na mmalite ọnwa Disemba.
Oge ahụ bụ oge oyi. Jizọs nọ na-ejegharị n’ụlọ nsọ ahụ n’ebe veranda nwere ogidi nke Sọlọmọn. N’ebe ahụ, ndị Juu gbara ya gburugburu ma jụọ ya, sị: “Ị̀ ga-ekowe anyị obi n’elu ruo ole mgbe? Ọ bụrụ na ị bụ Kraịst, gwa anyị hoo haa.” (Jọn 10:22-24) Gịnị ka Jizọs zara ha? Ọ gwara ha, sị: “Agwara m unu, ma unu ekweghị.” Jizọs agwabeghị ha hoo haa na ya bụ Kraịst, otú ahụ ọ gwara nwaanyị Sameria mgbe ọ bịara isere mmiri n’olulu mmiri. (Jọn 4:25, 26) Ma, o meela ka ha mata onye ọ bụ mgbe ọ gwara ha, sị: “Tupu a mụọ Ebreham, mụ onwe m adịrịla ndụ.”—Jọn 8:58.
Jizọs chọrọ ka ndị ahụ jiri ihe ndị ọ na-arụ tụnyere ihe ndị e buru n’amụma na Mesaya ga-arụ ma si na ha ghọta na ọ bụ ya bụ Kraịst. Ọ bụ ya mere na n’oge ndị ọzọ, ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha ghara ịgwa ndị mmadụ na ọ bụ ya bụ Mesaya ahụ. Ma, ugbu a, ọ gwara ndị Juu ahụ bịakwutere ya hoo haa, sị: “Ọrụ niile m na-arụ n’aha Nna m na-agba àmà banyere m. Ma unu ekweghị.”—Jọn 10:25, 26.
Gịnị mere na ha ekweghị na Jizọs bụ Kraịst? O kwuru, sị: “Unu ekweghị, n’ihi na unu esoghị n’atụrụ m. Atụrụ m na-ege ntị n’olu m, amakwaara m ha, ha na-esokwa m. M na-enyekwa ha ndụ ebighị ebi, a gaghịkwa ebibi ha ma ọlị, ọ dịghịkwa onye ga-apụnara ha n’aka m. Ihe Nna m nyere m karịrị ihe ndị ọzọ niile.” Jizọs gwaziri ha otú ya na Nna ya dịruru ná mma. Ọ gwara ha, sị: “Mụ na Nna m bụ otu.” (Jọn 10:26-30) Jizọs nọ n’ụwa mgbe ahụ, Nna ya nọ n’eluigwe. N’ihi ya, ihe ọ na-ekwu abụghị na ya na Nna ya bụ otu onye. Kama, ọ na-ekwu na ya na Nna ya dị n’otu, na ha nwere otu obi.
Ihe a Jizọs kwuru were ndị Juu ezigbo iwe, ha atụtụrụ nkume chọọ ịtụgbu ya. Ma, nke a emeghị ka Jizọs tụọ ụjọ. Ọ gwara ha, sị: “Egosiri m unu ọtụtụ ọrụ ọma si n’aka Nna m. Ole nke n’ime ọrụ ndị ahụ mere unu ji na-atụ m nkume?” Ha kwuru, sị: “Anyị na-atụ gị nkume, ọ bụghị n’ihi ọrụ ọma, kama n’ihi nkwulu . . . n’ihi na gị onwe gị na-eme onwe gị chi.” (Jọn 10:31-33) O nwetụbeghị mgbe Jizọs kwuru na ya bụ Chineke. N’ihi ya, gịnị mere ha ji ebo ya ebubo a?
Nke bụ́ eziokwu bụ na Jizọs na-ekwu na ya nwere ikike ndị Juu kweere na ọ bụ naanị Chineke nwere. Dị ka ihe atụ, Jizọs kwuru gbasara ndị bụ́ “atụrụ,” sị: “M na-enyekwa ha ndụ ebighị ebi.” Mmadụ agaghị enyeli mmadụ ibe ya ndụ ebighị ebi. (Jọn 10:28) Ndị Juu ahụ achọghị ịma na Jizọs agwala ha n’ezoghị ọnụ na ọ bụ Nna ya nyere ya ikike o ji na-arụ ọrụ ya.
Jizọs gbaghara ebubo ha boro ya ma jụọ ha, sị: “Ọ̀ bụ na e deghị ya n’Iwu unu [n’Abụ Ọma 82:6], sị, ‘Asịrị m: “Unu bụ chi”’? Ọ bụrụ na ọ kpọrọ ndị ahụ okwu Chineke bịakwasịrị ‘chi,’. . . ùnu na-asị m, bụ́ onye Nna m doro nsọ ma zite n’ụwa, ‘Ị na-ekwulu Chineke,’ n’ihi na m sịrị, abụ m Ọkpara Chineke?”—Jọn 10:34-36.
N’eziokwu, Akwụkwọ Nsọ kpọrọ ụmụ mmadụ na-ekpe ikpe na-ezighị ezi “chi.” N’ihi ya, gịnị mere ndị Juu ahụ ji enye Jizọs nsogbu maka na ọ sịrị: “Abụ m Ọkpara Chineke”? Jizọs gwara ha ihe mere ha ga-eji kweta na ya bụ Ọkpara Chineke. Ọ sịrị: “Ọ bụrụ na mụ adịghị arụ ọrụ Nna m, unu ekwerela na m. Ma ọ bụrụ na m na-arụ ha, ọ bụrụgodị na unu ekwereghị na m, kwerenụ ọrụ ndị ahụ, ka unu wee mara ma nọgide na-amara na mụ na Nna m dị n’otu, nakwa na Nna m na mụ onwe m dịkwa n’otu.”—Jọn 10:37, 38.
Mgbe Jizọs kwuchara ihe a, ndị Juu gbalịrị ka ha jide ya. Ma ọ gbanahụrụ ha. Jizọs hapụrụ Jeruselem gaa ná mpaghara nke ọzọ nke Osimiri Jọdan n’ebe Jọn nọ mee ndị mmadụ baptizim ihe fọrọ obere ka o ruo afọ anọ tupu mgbe ahụ. Ebe ahụ nwere ike ịdị nso n’ebe ngwụcha ndịda Oké Osimiri Galili.
Ìgwè mmadụ bịakwutere Jizọs ma kwuo, sị: “Jọn emeghị otu mkpụrụ ihe ịrịba ama, ma ihe niile Jọn kwuru banyere nwoke a bụcha eziokwu.” (Jọn 10:41) N’ihi ya, ọtụtụ ndị Juu nwere okwukwe na Jizọs.
Gịnị mere Jizọs ji gwa ndị Juu gbasara ọrụ ya?
Olee otú Jizọs na Nna ya si bụrụ otu?
Ndị Juu boro Jizọs ebubo na ọ na-eme onwe ya chi ma ọ bụ na-eme ka ya na Chineke hara. Olee otú Jizọs si jiri ihe e dere n’Abụ Ọma gosi na ebubo ahụ ha boro ya bụ ụgha?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Jizọs na Nna Ya Bụ Otu, Ma Ọ Bụghị Chineke
jy isi 81 p. 188-189